Kedu mba ndị NEO dị na?
NEO na-enye ndi ahia ahia di iche iche banyere ahia n ’uwa nile, n’enye nnwere onwe ego n’enye ha.
You nwere ike mepee akaụntụ anyị n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ akụkọ gbasara ego gị, mana anyị nwere ndepụta nke mba ndị anyị na-anaghị abanye na ndị ahịa. Nwere ike ịchọta ndepụta zuru ezu nke ọchịchị Blacklisted na ibe anyị raara onwe anyị nye: "Blacklisted ikike ”.
Kedu ka m ga-esi debanye aha?
Itinye akwụkwọ maka akaụntụ NEO dị mfe ma nwee ike ime ya.
Iji malite usoro ngwa ahụ, pịa “Mepee akaụntụ nkeonwe” ma gaa na ụdị ngwa ahụ. Mgbe ị nyefere ntinye akwụkwọ anamachọihe gị, okwu gị ga-agafe nyocha nyocha anyị.
Nzọụkwụ a nwere ike iburu ụbọchị azụmahịa 7-10. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịrịọ gị ka ị nyekwuo ozi iji mezue ihe niile dịka ihe ndị nchịkwa anyị chọrọ.
Biko rịba ama na mgbe enyochachara akwụkwọ gị ma mepee akaụntụ gị, ị ga-enweta email site na NEO na njikọ ntọala okwuntughe.
Njikọ ahụ dị maka 24h ma ọ gwụchaa, ị kwesịrị ịrịọ nke ọhụrụ site na ịkpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa anyị bancaneo@protonmail.ch.
Mgbe edoziri paswọọdụ gị, biko gaa na Google Play ma ọ bụ AppleStore iji budata ngwa anyị.
Oge ikpeazụ nke usoro mmeghe akaụntụ na-enyocha njirimara gị site na ngwa mkpanaka anyị.
Gị ama ga-enwe a n'ihu igwefoto. Biko mee ka paspọtụ gị ma ọ bụ NJ mba gị dịkwa njikere.
Kedu ihe nyocha ID?
Ọ bụ usoro nyocha njirimara nke onye ọlụlụ anyị Onfido kwadoro, nke emere site na oku vidiyo n'otu oge.
Kedu ka m ga-esi mezue oku nyocha vidiyo ID?
Onye anyị na Onfido mepụtara usoro nchekwa, nchekwa na adaba maka nyocha ID dijitalụ na ezigbo oge, site na ebe ọ bụla n'ụwa.
Iji bido usoro nkwenye NJ gị, biko banye na ngwa ngwa ekwentị NEO gị na ama gị, jiri adreesị ozi-e na paswọọdụ gị.
N'oge a na-akpọ vidiyo ị ga-ese foto nke paspọtụ gị ma ọ bụ NJ mba gị, mee selfie, mee ka isi gị gaa n'aka nri na aka ekpe wee kpọọ nọmba ole na ole, nke usoro ahụ ga-enye gị. Ọ gaghị ewe ihe karịrị otu nkeji nke oge gị.
Ndị a bụ aro ole na ole iji kwadebe onwe gị maka oku vidiyo:
Gbaa mbọ hụ na ị nọ n’ebe dị jụụ na njikọ intaneti siri ike yana ọkụ ọkụ dị mma.
Họrọ obodo amaala gị, lelee ụdị akwụkwọ ị nwere ike iji wee kwado ya.
Ihe dị mkpa: ịnwere ike ịgafe njirimara na njirimara mba ma ọ bụ paspọtụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye bi na EU ma jiri paspọtụ Naanị ma ọ bụrụ na ị bụghị onye bi na EU.
Kedu ihe kpatara oku nyocha vidiyo ID ji dị mkpa?
NEO na Satchel nwere ikikere nke Ngalaba Nlekọta Ọrụ nke National Bank of Lithuania nyere ma nyekwa ikike ụlọ ọrụ ego elektrọnik Nr. 28, jiri usoro ntinye aka nke ugwo Nr. 30600, ma na-azụ ahịa n'okpuru iwu nke Republic of Lithuania, dị ka EU Directive (2009/110 / EC) na EU Directive (2015/2366) na ọrụ ịkwụ ụgwọ EU.
Iwu chọrọ ka anyị nyochaa njirimara gị tupu anyị emepee akaụntụ Satchel maka gị.
Usoro nyocha nke ID site na oku vidiyo bụ usoro nnweta nnabata nke iwu kwadoro, nke ezubere iji rube isi n'iwu na iwu ụlọ akụ kachasị ọhụrụ, yana Iwu Mgbochi Ego Ego (AML).
Afọ ole ka m ga-eji jiri ọrụ NEO?
N'oge a, afọ kacha nta maka ịbụ onye ahịa NEO bụ 18.
Anyị na-arụ ọrụ iji belata ya n'ọdịnihu, na-emepe emepe ngwaahịa maka ọgbọ na-eto eto.
NEO Akaụntụ Ugbu A
Ebee ka akaụntụ azụmaahịa NEO dị?
NEO maka Azụmaahịa dị ugbu a maka ụlọ ọrụ ndị edebanyere aha ma nwee anụ ahụ na European Economic Area (EEA) ma ọ bụ Switzerland.
Nke a gụnyere mba ndị a:
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na akwadoghi obodo m?
Anyị ga-agbakwunye ngwa gị na listi nchere anyị kachasị mkpa ma gwa gị ozugbo ọrụ anyị dị na mba gị.
Kedu ka m ga - esi mepee akaụntụ?
Nwere ike mfe imeghe a onye or azụmahịa akaụntụ site na itinye akwụkwọ mmeghe akaụntụ nkeonwe / azụmaahịa, nke ị nwere ike ịhụ na weebụsaịtị anyị.
Mgbe etinyere ụdị ahụ, ọ nwere ike were ụbọchị 7-10 rụọ ọrụ iji mezue ndenye nnabata na imeghe akaụntụ gị.
Kedu akwụkwọ achọrọ iji mepee akaụntụ nkeonwe ma ọ bụ nke azụmahịa?
Nwere ike ịchọta ndepụta nke akwụkwọ achọrọ na weebụsaịtị anyị:
Ihe edere maka ndị mmadụ n'otu n'otu: PỊA EBE A
Akwụkwọ edere maka azụmaahịa: PỊA EBE A
Kedu ihe ndị achọrọ maka ndị nwe ụlọ na ndị isi ụlọ ọrụ bara uru?
Imepe akaụntụ azụmahịa nke NEO, anyị kwesịrị ikwenye nkọwapụta nke ndị isi na ndị bụbu ndị nwe ụlọ ọrụ gị.
Iwu a kwekọrọ na usoro usoro iwu "Mara Onye Ahịa Gị" (KYC), nke na-enyere ndị azụmaahịa aka ịchọpụta njirimara ndị ahịa ya.
Ikwesiri inye nkọwa nke ndị nwere ihe karịrị 25% nke oke ahịa gị.
Ndị nwe obodo a na ndị isi ga-eweta foto dị elu nke NJ, nke bara uru maka ọnwa atọ na-esote. Nwere ike ịkpọ ha ka ha nyefee nyocha ID ha n'ụzọ kwụ ọtọ ma ọ bụ bulite dọkụmentị na nnọchite ha.
Biko rịba ama na anyị nwere ike ịrịọ maka akwụkwọ ndị ọzọ.
Kedu ụdị akụkọ anyị na-enye?
Emepere akaụntụ nna gị ukwu na EUR, na-abịa na IBAN na BIC pụrụ iche, ewepụtara ya maka ịkwụ ụgwọ SEPA naanị.
Enwere ike imeghe akaụntụ ndị ọzọ maka mbufe mba ofesi na ego dị iche iche site na ịkekọrịta IBAN.
Ordertụ akaụntụ na ọzọ ego, biko nyefere a SWIFT iji ụdị, na anyị ga-alaghachikwute gị na ihe ndị kasị mma ngwọta maka gị akụ mkpa.
SWIFT iji ụdị
Ndi NEO na-enye oru ntaneti ego?
Eeh. Akaụntụ IBAN ọ bụla ma ọ bụ nke azụmahịa e meghere na NEO gụnyere ohere ịnweta ọrụ ụlọ akụ anyị n'ịntanetị.
Enwere m ike ijikwa akaụntụ NEO m site na ekwentị m?
Ee, ị nwere ike ịnweta NEO gị maka akaụntụ site na ekwentị gị site na ibudata ngwa nchekwa akụ anyị (Satchel maka iOS na gam akporo).
Nwere ike ibudata ngwa ebe a:
iOS na gam akporo
Gini bu IBAN?
Nọmba Akaụntụ Mba (wa (IBAN) bụ koodu ọkọlọtọ maka ịmata ihe ndekọ ego mba ụwa gafere oke mba.
Otu IBAN dị na Europe nwere ọtụtụ mkpụrụedemede iri abụọ na asaa.
Azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ akaụntụ NEO nke onwe gị nwere IBAN pụrụ iche ekenye ya.
Ebee ka m nwere ike ịhụ IBAN m?
Nwere ike ịchọta nkọwa akaụntụ gị site na ịme usoro ndị a:
NEO Onye Ahịa Weebụ Web
Banye na akaụntụ NEO gị ma gaa na menu "Akaụntụ" n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo gị
“Akaụntụ” peeji nke
Họrọ ego achọrọ (ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ego abụọ ma ọ bụ karịa)
→ Pịa na Ego Ntuziaka taabụ
Họrọ otu n'ime akụkọ ndị dị ugbu a wee pịa ya.
NEO Mobile Ngwa
Jiri koodu passc gị banye wee họrọ ego dị mkpa (ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ego abụọ ma ọ bụ karịa)
→ “Tinye ego”
Kedu nkọwa m kwesịrị inye iji nweta nnyefe na-abata na akaụntụ NEO m?
Iji nweta ego na akaụntụ NEO gị, ị kwesịrị ịnye nkọwa akaụntụ gị zuru oke na onye na-akwụ ụgwọ.
Enwere ike ịchọta ha na EOlọ Ọrụ Ndị Ahịa NEO gị:
- Banye na akaụntụ NEO gị ma gaa na menu "Akaụntụ" n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo gị
Họrọ ego ndị dị mkpa (ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ego abụọ ma ọ bụ karịa)
→ Pịa na Ego Ntuziaka taabụ. Mgbe nke ahụ họrọ otu site na akaụntụ ndị dịnụ wee pịa ya. A ga-egosipụta nkọwa akaụntụ, dị ka Ego, Bank, IBAN, SWIFT BIC, na Aha Bara Uru.
- Jiri koodu passc gị banye wee họrọ ego dị mkpa (ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ego abụọ ma ọ bụ karịa)
→ “Tinye ego”. Mgbe nke ahụ họrọ otu site na akaụntụ ndị dịnụ wee pịa ya. A ga-egosipụta nkọwa akaụntụ, dị ka Ego, Bank, IBAN, SWIFT BIC, na Aha Bara Uru.
Kedụ ka m ga - esi mepee ego ọhụrụ?
Kedụ ka m ga-esi mechie akaụntụ ego m na-anaghị ejizi?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imechi akaụntụ gị, kpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa anyị bancaneo@protonmail.ch site na email gị edebanyere aha, ma rịọ ka ịmalite usoro mmechi akaụntụ.
Biko buru n'uche na enwere ike itinye ụgwọ ọzọ.
Nwere ike ịhụ atụmatụ tarifu anyị Ebe a.
Kedụ ka m ga - esi megharịa akaụntụ mechiri emechi?
O di nwute, enweghi ike imeghari aka na akaụntụ emechiri. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji ọrụ anyị ọzọ, biko tinye ọzọ site na itinye akwụkwọ anamachọihe nkeonwe ma ọ bụ nke azụmahịa.
Kedụ ka m ga - esi tinye ego na akaụntụ NEO m?
Nanị nhọrọ dị ugbu a iji nweta ego na akaụntụ gị bụ site na nnyefe ego.
Nwere ike ịchọta usoro ntinye ego nke akaụntụ gị site na ịme usoro ndị a:
Mara: Ọ bụrụ n’ị na-ebufe ego n’akụkụ ụlọ akụ akụ Europe ndị ọzọ a kwadoro nke SEPA na akaụntụ NEO gị na EUR, ị ga-ahụrịrị na ị na-ebufe SEPA iji zere ụgwọ ọ bụla ọzọ ụlọ akụ gị na-akwụ.
A ga-etinye ego ahụ na akaụntụ Satchel gị n'ime ụbọchị azụmahịa 1-3.
Kedụ ka m ga - esi tinye ego na akaụntụ NEO m site na kaadị kredit / debit?
Na nwute, nhọrọ a adịghị adị n'oge a.
Kedụ ka m ga-esi gbanwee nọmba ekwentị m, adreesị ozi-e, adreesị ndebanye ma ọ bụ data nkeonwe ndị ọzọ?
Iji gbanwee nkọwa kọntaktị gị ma ọ bụ data nkeonwe / azụmahịa, biko kpọtụrụ ndị ọrụ Nkwado Ndị Ahịa na bancaneo@protonmail.ch
Kedu otu m ga-esi nweta nkwupụta akụ?
Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na itinye n'ọrụ a na ntanetị ịntanetị anyị ka ị wee nwee ohere ịnweta ọsịsọ na mfe nkọwa ụlọ akụ gị.
Ruo mgbe ọ dị, ịnwere ike ịnweta nkwupụta akaụntụ site na ịkpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa anyị bancaneo@protonmail.ch, na-egosi oge dị mkpa na usoro nke nkwupụta dị na email ahụ.
Kedu ka m ga-esi mee mkpesa?
Enwere ike itinye akwụkwọ mkpesa site na ọwa atọ:
1. E debanyere aha edebanyere aha na ụlọ ọrụ anyị MM BITINVEST OU, Naituse tn 3, Tartu , 50409, Estonia;
2. Ozi E-mail bancaneo@protonmail.ch;
3. formdị ntanetị Ebe a
Anyị na-anabata nzaghachi ọ bụla dị mkpa sitere n'aka ndị ahịa anyị, ma jiri obiọma jụọ gị ka ị nye nkọwa zuru ezu banyere nsogbu / nsogbu ị na-enwe. Nke a ga-enyere anyị aka ime ihe kwesịrị ekwesị ozugbo.
Banye na Password
Kedu ka m ga-esi banye na ụlọ akụ m dijitalụ?
Nwere ike ịnweta akaụntụ bank dijitalụ gị n'ụzọ dị mfe site na ịpị bọtịnụ nbanye nke dị na igodo nsoro na ibe peeji nke:
Iji banye, biko jiri adreesị ozi-e nyere ikike yana paswọọdụ ị debere maka akaụntụ gị.
Olee otu m ga-esi gbanwee okwuntughe m?
Iji tọgharịa okwuntughe gị, biko kpọtụrụ ndị ọrụ nkwado ndị ahịa anyị info@vn0.9ce.myftpupload.com
Kedụ ka m ga-esi gbanwee e-mail nbanye m?
Ka ịgbanwee nkọwa kọntaktị gị, biko zipụ ụdị mgbanwe mgbanwe zuru ezu (njikọ iji mepụta) na ndị otu na-akwado ndị Ahịa anyị info@vn0.9ce.myftpupload.com
Enwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ọrụ maka akaụntụ azụmaahịa m?
Ee, enwere ike itinye onye ọrụ ọzọ na akaụntụ azụmaahịa gị.
Biko kpọtụrụ anyị Nkwado Ndị Ahịa na info@vn0.9ce.myftpupload.com maka enyemaka.
Kedu ihe bụ 2FA (Nyocha abụọ).
Na NEO anyị na-ezube maka ahụmịhe onye ọrụ emelitere, ka anyị na-echekwa ụkpụrụ nchekwa dị elu. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji nweta nyocha abụọ-akpata (2FA) maka akaụntụ NEO gị, nke na-agbakwunye nchekwa nchekwa ọzọ na-echebe akaụntụ gị site na nnweta na-enweghị ikike ma na-echekwa ego gị n'oge niile.
Site na 2FA, a ga-achọ ka ị banye ma paswọọdụ gị yana OTP (Paswọdu Otu-oge) zitere gị oge ọ bụla ị banyere na akaụntụ NEO gị, yana oge ọ bụla ị na-enyefe nnyefe.
Nyocha abuo (2FA) Ntuziaka onye ọrụ
Ịkwụ ụgwọ & Ahịa
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nyefe ego na akaụntụ NEO m?
Oge nhazi maka nnyefe na-apụ na-adabere n'ụdị mbufe.
Ntinye sistemụ dị n'ime ozugbo. Nyefe SEPA na-ewe n'etiti ụbọchị azụmahịa 1-2.
Nyefe SWIFT na-ewe n'etiti ụbọchị azụmahịa 3-5.
Achọrọ m izipu / nata mbufe na ego ọzọ karịa EUR, gịnị ka m kwesịrị ịme?
Na-enyefe mba na-abata / na-abata na bank na ego ndi ozo kariri EUR karia site na oru nke anyi na IBAN.
Enwetaghị m mbufe ego zuru ezu. Enwere ụgwọ ọzọ?
Anyị anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla mgbe ị na-etinye ego na akaụntụ NEO gị site na nnyefe ego.
Agbanyeghị, mgbe ị na-akwụ ụgwọ mba ofesi, onye na-ezipụ nwere ike ịhọrọ ndị ọzọ na-ekpuchi ụgwọ nnyefe a na-apụ apụ.
Ọzọkwa, mgbe ị na-enweta nnyefe SWIFT, onye na-ede akwụkwọ (intermediary) ụlọ akụ nwere ike iwepu ụgwọ ọrụ, ya mere enwere ike itinye obere ego na akaụntụ gị.
Enwetaghị m nnyefe na-abata. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Ọ bụrụ na ntinyeghị zitere gị na akaụntụ gị, ị kwesịrị ị nweta nkwenye ịkwụ ụgwọ site n'aka onye zitere ya ma ziga ya na ndị otu na-akwado anyị info@vn0.9ce.myftpupload.com
Emere m nyefee IBAN na-ezighi ezi. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Ọ bụrụ na ị gbanwere ihe na-ezighi ezi IBAN, biko gwa ndị otu nkwado anyị ozugbo bancaneo@protonmail.ch ma gwa ha ka ha bido ncheta ịkwụ ụgwọ.
Biko rịba ama, na ọ bụrụ na enyefelarịrị nnabata na akaụntụ nnata, anyị agaghị enwe ike ịgbanwe azụmahịa ahụ. N'okwu a, anyị ga-adụ ọdụ ka kpọtụrụ onye nnata ozugbo na-arịọ maka nloghachi.
Kedụ ka m ga - esi nyefe na akaụntụ NEO ọzọ?
Iji nyefee mbufe, ị ga-achọ naanị nọmba akaụntụ obere nke onye nnata.
Họrọ ụdị ịkwụ ụgwọ "Ntugharị n'ime" na ụlọ ọrụ ndị ahịa gị, tinye nọmba akaụntụ ahụ, usoro ahụ ga-enyocha nchekwa data na akpaghị aka. Naanị ihe fọdụrụ ime bụ itinye ego nke azụmahịa ahụ. Nyefe ga-gburu ozugbo.
Kedụ ka m ga-esi nye kaadị akwụ ụgwọ
Nwere ike ịgbaso njikọ a iji ịtụ kaadị akwụ ụgwọ, nke a ga-ejikọ aka na akaụntụ NEO gị.
Mara: Naanị ihe ị nwere ike ịtụ bụ Mastercard akwụgoro ụgwọ ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ugbu a na NEO.
Enwere m ike ịnweta kaadi na-enweghị mepee akaụntụ dị ugbu a na NEO?
Na nwute, nhọrọ a adịghị. Iji nweta kaadị ị ga-emepe akaụntụ nke ugbu a na NEO.
Kedu ihe dị iche n'etiti ego na-akwụ ụgwọ mgbe niile na ego eji akwụ ụgwọ ego?
Ihe dị iche dị na njedebe kaadị na ụgwọ. Tarifụ na-arụsi ọrụ ike na-enye ohere maka oke dị elu na obere ụgwọ.
Enwere m ike ịkwalite ọnụahịa m si na onye na-emefu ego na-emefu ego?
Ee, site na nkwado nkata.
Kedu mgbe a ga-ebuga kaadị m?
Mgbe enyere iwu gị, ma nye gị ego zuru oke iji kpuchie ụgwọ mbupu, a ga-eziga kaadị ahụ n'ime ụbọchị ọrụ na-esote.
Standard nnyefe oge bụ ugbu a na- 20 na-arụ ọrụ ụbọchị.
Gosiputa nnyefe nye mba EU na UK ekwesịghị iwe karịa ụbọchị azụmahịa 3.
Gbanwee nkwuputa na mba ndi ozo kwesiri ijiri ubochi ise.
Kaadị ole ka m ga-enweta na akaụntụ NEO m?
Akaụntụ nkeonwe: Kaadị rọba 1 na njide akaụntụ na 2 mebere kaadị kwa onye na-ejide akaụntụ.
Akaụntụ Azụmaahịa: kaadị 5 kacha elu (mebere ma ọ bụ plastik) maka ihe ruru ndị na-ere 5 n'aka otu akaụntụ azụmaahịa.
Kedu ego m nwere ike inye kaadị NEO m?
N'oge a na-enye kaadị na EUR.
Kedụ ka m ga - esi rụọ ọrụ kaadị m?
Nwere ike ime nke a site na ntọala kaadị na ụlọ ọrụ ndị ahịa gị. Ikwesiri igha n'ihu idozi kaadi gi.
A ga - enyere ọrụ niile kaadị aka ka ị rụọ ọrụ izizi na ATM ma ọ bụ POS.
Kedụ ka m ga - esi kwụnye kaadị NEO m?
Họrọ ngalaba Kaadị na ụlọ ọrụ ndị ahịa gị, họrọ kaadị ịchọrọ ịkwalite, tinye ego na akụkọ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma kwado azụmahịa ahụ na koodu gị.
Azụmahịa ahụ ga-atụgharị uche na nhazi kaadi gị.
Ebee ka m nwere ike ịhụ PIN nke kaadị m?
Nwere ike ịchọta ya mgbe niile na ntọala kaadị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe ya, ị nwere ike ime nke ahụ site na nkata.
Ndi kaadi NEO m nwere njirimara contactless?
Ee, kaadị NEO niile enweghị kọntaktị.
Gịnị bụ ugbu a ịgba maka a contactless ugwo?
Ọ bụ ndị ụlọ ahịa na-ere oke ahụ, nke World Payment Systems duziri ha. Ọtụtụ mgbe njedebe dị n'etiti 25-50 EUR.
Kedu ihe bụ 3D Secure? Enwere ya na kaadị m?
3D Secure bụ atụmatụ emere iji bụrụ nchekwa nchekwa ọzọ maka azụmahịa kaadị e-commerce.
Kaadị NEO niile nwere 3D Secure.
Enwere ókè kaadị ọ bụla?
Nwere ike ịlele oke kaadị NEO EBE A.
Iji bulie oke kaadị gị, biko kpọtụrụ anyị site na nkata ma ọ bụ nainfo@vn0.9ce.myftpupload.com
Enwere m ike ịdọrọ ego na kaadị NEO m na igwe ndọrọ ego?
You nwere ike ịdọrọ ego na kaadị NEO gị na AMT ọ bụla nke na-akwado Mastercard. Biko mara na enwere njikọ
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na kaadị NEO m?
Ee, ị nwere ike iji kaadị NEO gị kwụọ ụgwọ n'ịntanetị.
Biko dị njikere nha nke kaadị ahụ dị elu karịa ọnụọgụ azụmahịa ị chọrọ ịrụ.
Etufuru m kaadị NEO m. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Ọ bụrụ na kaadị gị efunahụ, ị ​​kwesịrị ị gwa ndị otu Kaadị anyị ngwa ngwa site na nkata ma ọ bụ na info@vn0.9ce.myftpupload.com, ma gwa ha ka ha gbochie kaadị gị. Ndị otu a ga - eduzi gị site na usoro ndị a.
Kaadị m na-achọ ịnwụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Otu ọnwa tupu ụbọchị mmebi kaadị ị ga-enweta ọkwa banyere nnọchi kaadị.
N'otu ozi ahụ, a ga-ajụ gị ka o gosipụta adreesị nnyefe gị.
Mara: Biko buru n'uche na ozugbo ị natara kaadị ọhụrụ gị, ị ga-emerịrị ya na NEO web Client Office ma ọ bụ site na ngwa mkpanaaka.
Enwere m ike igbochi kaadị NEO jikọtara na akaụntụ ego?
Eeh. Iji mee nke a, biko zigara ndị otu anyị Nkwado Ndị Ahịa site na nkata ma ọ bụ na info@vn0.9ce.myftpupload.com.
Ndi ụlọ ọrụ nwere ike ịnye ndị ọrụ ya kaadị n'okpuru akaụntụ azụmahịa?
Eeh. Maka nkọwa biko kpọtụrụ anyị